Hua Hin Xalaal Hagaha Socdaalka Safarka Mart
Hua Hin (หัวหิน) waa magaalo xeebeed xeeb dalxiis oo ay ku nool yihiin qiyaastii 50,000 oo qof (2012) gudaha Thailand. 195 km u jirta Bangkok, waxay caan ku tahay Thais, oo noqotay mid aad moodo inay tahay maalin fasax ah dhamaadka usbuuca dadka Bangkok deggan, ajaanibta, iyo sida hawlgabka shisheeyaha ama guriga fasaxa.
In kasta oo ay si dhakhso leh u kobcinayso, haddana waxaa jira ballanqaad ay wadaan mas'uuliyiinta maxalliga ah iyo kuwa gobolku si looga fogaado nooca kuleylka kuleylka ee saameeyay goobaha kale ee xeebta Thailand.
Hordhaca Hua Hin
Hua Hin Beach, Hilton Hotel gadaal
Hua Hin oo caan ku ah dalxiis ahaan horaantii 1920-meeyadii King Prajadhipok, Hua Hin waxay xiriir dhow la leedahay qoyska boqortooyada Thai waana goob xasilloon oo nasasho leh oo ku habboon fasaxyada qoysaska, waxayna macquul tahay 2½ saacadood oo ka hooseysa Bangkok. Ilaa 1934, waxaa loo yiqiinay Samore Riang (เรียง เรียง), ama "safaf dhagax ah".
Tuulada kalluumeysiga ee xasilloon ayaa loo rogay meel dalxiis oo boqortooyo ah sidaa darteedna waxay caan ku noqotay sharaftii iyo dabaqadihii sare ee Siam. Sanadkii 1928, Prajadhipok wuxuu dhisay kiisii Klai Kangwon ("Ka fog Walwalka") Qasriga. Laga soo bilaabo 2018, Klai Kangwon waa degmo xagaaga ah oo boqorka ah mana u furna dadka soo booqda, in kasta oo daaraha kore ee qasrigu u furan yihiin socodka iyo orodyahannada laga bilaabo 16:00 ilaa 19:00 maalin kasta (xidho kabo, waxay leeyihiin shaarar gacmo-gashi ah oo dusha ka daboolan ugu yaraan gacmahaaga sare oo soo qaado baasaboorkaaga).
Xeebta oo dhererkeedu yahay 6 km waa mid qurux badan oo nadiif ah, kana faro badan tan Pattaya, nadaafadda badda waxaa lagu qiimeeyaa “cadaalad”. Si kastaba ha noqotee, inta badan xeebta ayaa gebi ahaanba lagu waayi karaa qaybo ka mid ah xeebta inta lagu jiro mawjadaha sare. Marka lagu daro qorraxda oo keliya, quusidda iyo dabaasha, booqdayaashu waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan golf, isbooris, godad, meelaha ugu sarreeya, biyo-dhacyo, dukaamo, cunno badeed, iyo jardiinooyin qaran oo u dhow. Magaalada waa nadiif, saaxiibtinimo, iyo dib-u-dhac, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon qoysaska iyo lamaanayaasha.
Macluumaadka dalxiiska waxaa laga heli karaa geeska Petchkasem Road iyo Damnerkasem Road (Soi 76), oo aad ugu dhow saldhigga tareenka.
Waxa kale oo jira Xarunta macluumaadka dalxiiska oo u dhow munaaradda saacadda ee Bartamaha magaalada, taas oo ku xigta Starbucks kuwa adiga u baahan hagaajinta kafeyn. Halkaan sidoo kale waa meesha ay basas badan oo basasku u joojiyaan inay ka dejiyaan oo ka qaadaan rakaabka, in kasta oo aysan ahayn saldhigga basaska rasmiga ah, sidaas darteedna ay tahay meel sahlan oo laga helo taksi mooto ama tuk-tuk.
Magaalada Hua Hin laguma magacaabi karo muuqaal dabiici ah. Ka sokow xeebta, sagxadaha hudheelada posh, iyo dhowr baloog oo galbeedka kaga beegan Hilton Hotel, ma jirto meel loo maro oo lagu safro Hua Hin. Magaaladu waxay la'dahay barxad dhexe ama bar tilmaameed. Sida magaalooyin badan oo Thai ah, Hua Hin waxay ku tahay cabsi habeen dadka lugeynaya oo aan macquul aheyn kuwa naafada jireed, indhoolayaasha, ama kuwa kuxiran kursiga curyaamiinta. Calaamadaha iyo caqabadaha kale ayaa hortaagan laamiyada, halkaas oo ay ku yaalliin dhinacyadu, dhowrkii mitirba mar. Wadada Phetkasem, oo magaalada u kala qaybisa laba qaybood, waa orod orod macmal ah, oo leh tanaasul yar sida kuwa lugeynaya ama kuwa lugeynaya ama baaskiillada baaskiilleyda.
Wadada Phetkasem ayaa kala qeybisa magaalada, taasoo keenta Cha-am dhanka waqooyi iyo Prachuap Khiri Khan dhanka koonfureed. Waddooyinka ku teedsan Phetkasem ee dhinaca gudaha ayaa ah xitaa sois-lambar. Kuwa badda dhinaceeda jooga waa kuwo aan tiro lahayn. Lambaradu iskuma ekaan guud ahaan Phetkasem. Tusaale ahaan, Soi 61 waxay u socotaa aagga badweynta ee agagaarka Hotel Hilton. Isla waddada dhinaceeda kale ee Phetkasem waa Soi 76. Waxay u socotaa saldhigga tareenka. Geesta waqooyi -bari ee isgoyska Soi 61/Soi 76 waxaad ka heli doontaa Xarunta macluumaadka dalxiiska. Waxaa ka dambeeya saldhigga dhexe ee booliska. Wadada dhinaceeda saldhigga bilayska waxaa ku yaal boosto. Ku sii socoshada Soi 61 ilaa xeebta waa xafiiska Booliiska Dalxiiska.
Hua Hin waxay leedahay cimilo kulul oo qoyaan badan leh iyo roob mararka qaarkood. Caadi ahaan waa wax lagu farxo hase yeeshe, waana lagu raaxeysan karaa sanadka oo dhan. Guud ahaan, waqtiga ugu wanaagsan sanadka ee la booqdo Hua Hin waa xilliga qabow laga bilaabo Nofeembar ilaa Febraayo, laakiin kuwa jecel kuleylka, markaa xilliga kulul waa laga bilaabo Maarso illaa Maajo (heerkulku wuxuu gaarayaa 30-ka sare). Xilliga roobaadka (inkasta oo aanu roob da’in maalin kasta) waa bilaha Juun ilaa Oktoobar iyada oo bisha Sebtember ay tahay midda ugu roobka badan. Roobka Thailand inta badan wuxuu ku yimaadaa qaraxyo fiiqan oo gaaban. Caadi ahaan ma daadinayso muddo dheer.
Tayada biyaha Gacanka Thailand ee badhtamaha Hua Hin ayaa lagu qiimeeyay "cadaalad" sanadkii 2015 waaxda xakamaynta wasakhda. Laakiin, warbixintu waxay xustay in "areas meelaha ugu muhiimsan ee dalxiiska, oo kala ah Cha-Am Beach… iyo Hua Hin Beach… ay tahay in si joogto ah loola socdo, maadaama heerarka bakteeriyada enterococci (fecal) ay ka sarreeyaan heerka standard."
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee booqdaha ku socda Hua Hin ogeysiiska waa barafka calaamadaha. Sida iska cad qof waliba wuu qori karaa calaamad. Huteelada iyo shirkadaha kale ee ganacsiga waxay qaabeeyaan astaamahooda si ay ugu ekaadaan calaamado rasmi ah. Iyaga iyo nooc kasta oo calaamado ah oo la mala awaali karo ayaa xaalufiya deegaanka kana qayb qaata xumaantiisa. Saraakiisha magaalada sabab kasta haku kalifaan dhaqangelinta xukummadaha calaamadaha jira.
gudaha Hua Hin
Dalxiiska Akamai Village Hua Hin
Dalxiiska Anantara & Spa Hua Hin
Degaanka Araya Hua Hin
Bacchus Guri Dalxiis Hua Hin
Banyan Resort iyo Golf Hua Hin
Doonta Lodge Resort Hua Hin
Cha Ba Chalet Resort Resort Hin
Dalxiis Devasom Hua Hin
Dalxiiska Dhevan Dara & Spa Hua Hin
Dalxiiska Dusita Resort Pranburi
Dalxiiska 'Foresta Boutique Resort' iyo Huteel Hua Hin Pranburi
Gallery Cagaaran B&B Hua Hin
Hoteelka De La Paix Cha Am Beach - Hua Hin
Hua Hin Sand Sand Hotel
I Dalxiis Cliff View Hua Hin
Keeree Wareega Xeebta Villa & Spa Hua Hin
Dalxiiska Dalxiiska Koh Talu Bangsaphan
Hoteelka Le Bayburi Pranburi
Aynu u dalxiis tagno Badda Hua Hin Al Fresco
Hotelka Nicha Hua Hin
Dalxiiska Nishaville & Spa Hua Hin
Hoteelka Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa
Dalxiiska Pattawia & Spa Hua - Hin
Hotelka Bihai Hua Hin
Dalxiiska Imperial Hua Hin Beach
Dalxiis Xeebeedka Dalxiiska Gaarka ah & Spa Hua Hin
Dalxiis Xeebeedka Dalxiis ee Rock Hua Hin
Dalxiis Veranda & Spa Hua Hin
X2 Ku Dalxiis Kui Buri
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Xalaal ee Thailand > Hua Hin Xalaal Hagaha Socdaalka